प्रदेश ५ मा जोखिम बढ्दै - Pradesh Today
Homeफिचरप्रदेश ५ मा जोखिम बढ्दै
प्रदेश ५ मा जोखिम बढ्दै
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगेको हो । सोमबार एकैदिन कपिलवस्तुमा १० र सप्तरीमा १ थप भएका छन् ।
नयाँ संक्रमितहरू सबै कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नं. ५ र बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ७ र १० निवासी हुन् । उनीहरूको उमेर १८ देखि ३४ वर्ष रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकजनाको उमेर खुलेको छैन ।
संक्रमित सबै पुरूष हुन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र सबैजना चिकित्सकको सम्पर्कमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नेपालमा अहिलेसम्म १ सय २१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिए
। उनका अनुसार ३१ जना निको भएका छन् । सरकारले सबै जिल्लामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण सुरू गरेको छ भने सबै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा गरेर १८ अस्पतालबाट पीसीआर विधिबाट स्वाव परीक्षण भइरहेको छ । दाङका पनि परिक्षणको दायरा बढाइएको छ ।
झण्डै ३ सयभन्दा बढीको स्वाव संकलन गरेर पिसिआर गरिएको छ । अहिलेसम्म दाङमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
भारतबाट भागेर आएका थिए
कपिलवस्तुमा सोमबार भेटिएका कोरोना संक्रमित भारतबाट केही दिन अघिमात्रै घर आएको पाइएको छ । सीमानाकामा नेपाल सरकारले नेपाल छिर्न नदिएपनि उनीहरू चोर नाकाको प्रयोग गरी कपिलवस्तु आएको बताएका छन् ।
घरमा आएपछि उनीहरू सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला गरिएको स्वाव संकलनमा उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
सोमबार भेटिएका १० जना मध्ये ८ जना भारतीय सिमावर्ती यशोधरा गाउँपालिकाको बैदौलीका हुन् । यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नं. १० र वडा नं. ७ मा भेटिएका दुई संक्रमित पनि क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
उनीहरूको शनिबार नै स्वाव संकलन गरेर काठमाडौं पठाइएको थियो । जसमा सोमबार बिहान मात्र रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । यसभन्दा अगाडि बिहीबार र शनिबार भेटिएका ५ जना कोरोना संक्रमित पनि भारतीय नाकाबाट लुकेरै आएका थिए ।
यसरी भारतबाट लुकेर आउने जिल्लामा बढिरहेका छन् भने कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढिरहेको छ । आइतबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दशगजामा १८ सय ५४ जना अलपत्र परेका छन् । जसमा ८ सय १६ जना कपिलवस्तुमा मात्र छन् ।
कोरोनाको उच्च प्रभावत क्षेत्र बनेपछि कपिलवस्तुलाई जेठ ५ गतेसम्मका लागि सिल गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले सोमबार बेलुकादेखि पूरै जिल्ला सिल गरेको हो ।